Ingoma yothando nethemba emitatsheni yezincwadi | Izincwadi Zamanje
UMaria Ibanez | | Literatura
Emizuzwini embalwa edlule bengisenethini ngifuna lezo zindaba ezivelele zokuthi njengebhulogi yezincwadi kufanele siphawule ngoyebo noma yebo. Ngize eLibrópatas ngenhlanhla, ibhulogi enhle eyaqalwa ngabathandi bezincwadi ababili futhi esebenza kahle kakhulu.
Ngiqale ukuphenya okunye kokuthunyelwe kwakhe futhi ngathola izindatshana ezikhuluma ngezincwadi okufanele ngizifunde ngaphambi kweminyaka engama-30, izincwadi sonke esizifunde njengezingane nezinto ezinjalo. Lokhu kunginike ithuba lokuzibuza ngesihloko salokhu engifuna ukukhuluma nawe ngakho namuhla. Sizithola kanjani zonke lezo zincwadi okufanele sizifunde noma okufanele sizifunde?
Ngibe sengikhumbula ezinye izingxoxo nababhali lapho babekhuluma khona ngokuthi bazithola kanjani izincwadi. Imvamisa ukuthintwa kokuqala kwakwenziwa kumtapo wezincwadi omncane noma omkhulu womndeni, kuya ngecala, futhi ngemuva kwalokho, isiphazamisi sokufunda saqhubeka sondla eMtapowolwazi.
Namuhla ngizovuma okuthile ngami okuphikisana ngokujulile: Ngingumtapo wolwazi futhi ngiseyingane angikaze ngiye emtatsheni wezincwadi. Eqinisweni, ngicabanga ukuthi okokuqala ngaya kulabhulali yami kamasipala ngangisesikoleni esiphakeme ukwenza isabelo sekilasi. Ngingaba neminyaka eyishumi nanhlanu ubudala.
Umtapo wezincwadi esikoleni sami wawungenjalo. Kwakunamashalofu anezincwadi eHholo LoMhlangano lapho izinsuku ezimbili ngesonto uthisha, lapho ephuma esikoleni, wayekhona ukuboleka imali. Izingane beziminyene futhi bengingakwazi ukuhlala ngoba bekufanele ngigibele ibhasi, ngakho angikaze ngilisebenzise. Ngikhumbula le ndawo imnyama futhi inamakhethini abomvu, ngoba imicimbi yayingabanjwanga neze futhi yayingena endlini yokugcina izimpahla.
Uma ngicabanga ngalobu buntwana nobusha ngaphandle kwemitapo yolwazi ... kungenzeka kanjani ukuthi izincwadi ziyinto ebaluleke kangaka empilweni yami uma ngangingakaze ngikwazi ukuyithola? Ngiwuthanda kanjani umsebenzi wami womtapo wolwazi kakhulu uma ngingakaze ngiwusebenzise ngize ngiqale ikolishi ngineminyaka eyi-18?
Ukuxhumana kwami ​​nezincwadi kwafika ngenxa yokuthi ubaba wayeyindoda yokufunda futhi nginodadewethu ababili abadala abaphakela umtapo wezincwadi omncane womndeni wami ngokufundwa kwezikole eziphakeme kanye nezinye izincwadi zokuzikhethela.
Ngiseyingane ngikhumbula ngifunda futhi ngiphinda izinkondlo zikaMachado ezisencwadini yakudala kababa noma ngibheka ngokulangazelela i-biography kaChe Guevara.
Umtapo wezincwadi kaMasipala okuwukuphela kwawo, edolobheni elinabantu abangama-60.000, wayenaso ngemoto isigamu sehora, ihora lonke ehamba ngezinyawo. Ukuthenga izincwadi kwakuwukunethezeka emndenini owawunomnotho oxegayo njengowami, ngisho nezitolo zezincwadi zazikude kakhulu.
Ngihlala ngithi ngiyakuthanda ukufunda ngoba ngikhule ngibuka abantu befunda, hhayi ngoba nginezindawo eziseduze ezingiphakela ilukuluku lokufunda.
Ngemuva kokusho lokhu, ngiyavuma ukuthi nginomona lapho ngifunda ababhali abathi baya emtatsheni wezincwadi besebancane nokuthi babefunde konke okufanele kufundwe yingane. Ngiyazifunda futhi ISuper Fox izikhathi ezingenakubalwa ngoba ngangingenayo enye.
Futhi ngibhekene nalokhu okuhlangenwe nakho, kuyangimangaza izitatimende ezinjengalezo zosopolitiki wendawo owasho ngaphandle kokugcona lokho «bebezotshala kanjani imali kulabhulali lapho kunabantu abangenayo imali yokudla«, impendulo wayinikeza umsebenzi wasemtatsheni wezincwadi ngesicelo semali yokuthenga izincwadi zengxenye yezingane, eyayingasasebenzi futhi isesimeni esibuhlungu somzimba.
Wayengaphendula ngokuthi uma umndeni wawungenakho ukudla, kakhulu bekungaba nokuthola izincwadi nokuyilapho umtapo wolwazi womphakathi ungangenelela khona ukuze leyo ngane, ngoba ihlupheka, ingazizwa incishwa imfundo namasiko.
Kepha cha, emitatsheni yolwazi eminingi yomasipala abathumeli abathumela, kepha amakhansela amasiko afika ukuzothatha isithombe.
Sikunyaka wokhetho futhi ngilinde ukubona ukuthi yiziphi iziphakamiso zezombusazwe amaqembu azethulelayo zokuvuselela isikhungo esibaluleke kakhulu emphakathini njengemitapo yolwazi.
Iqiniso ngukuthi babacabanga njengokuthile abazotshala imali kukho ngezikhathi ezinhle, ngoba kuhle ngaso sonke isikhathi ukuvula umtapo wolwazi, kepha kuyizindleko ezingadingekile ngezikhathi zobunzima.
Ngamafuphi, bengifuna kuphela ukucabanga ngendima yomtapo wezincwadi ekwakheni umfundi omdala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Ingoma yothando nethemba emitatsheni yezincwadi